Miresaha amin'ny Departemantanao IT amin'ny Firefox | Martech Zone
Miresaha amin'ny Departemantanao IT amin'ny Firefox
Alakamisy, Desambra 4, 2008 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Heveriko fa efa simba be aho taloha raha ny momba ny departemanta IT. Nanana tamba-jotra tamin'ny asako voalohany aho ary izaho no lehilahy niaraka tamin'ny kilalao rehetra tao amin'ny departemanta (ankoatry ny talen'ny talenako tamin'izany fotoana izany dia nividy iray ho azy foana aho)
Ny nifindra teo anelanelan'ny asa samy hafa amin'ny Marketing sy ny Teknolojia dia nametraka ahy teo amin'ny lafiny roa amin'ny varavaran'ny IT ka fantatro ny fomba mahasosotra azy ny tsy fanananao ireo fitaovana ilainao. Na dia sarotra kokoa aza ny manohana azy dia mino aho fa ny teknolojia dia tokony hitondra fandrosoana sy fahombiazana. Tsy afaka manao izany raha mihidy ianao. Ilay namako akaiky, Adam Small, izay mihazakazaka a Orinasa Marketing amin'ny finday eto Indianapolis, mametraka azy tonga lafatra… dia ny sampan-draharahan'ny informatika misy anao manome fahafahana ianao na mampandeha ianao?
Miverina eo amin'ny lafin'ny Marketing eo am-baravarana aho miaraka amin'ny asako ankehitriny ary manandrana manaraka ny lalàna - saingy tsy mora izany. Fantatro ny rindrambaiko tonga lafatra rehetra any izay mampandeha ny androko - ary tsy afaka mampiasa an'io aho. Na eo amin'ny PC aza aho izao fa tsy Mac mahatoky. Fanelingelenana izany.
Miatrika ny fanamby aho, na izany aza! Raha tokony himenomenona (ivelan'ny bilaogiko aho) dia manaraka ny fitsipika faran'izay azoko atao aho ary manandrana mamantatra izay hanampy ao. Iray amin'ireo mpamonjy lehibe indrindra ahy ny nihazakazaka Firefox. Tsy vitan'ny hoe navigateur mahafinaritra izy io, fa ny add-on dia tena tsy mampino:
FireFTP - dia fampiharana FTP mahafinaritra ahafahako mihazakazaka mivantana ao amin'ny Firefox. Maimaimpoana (fa mba omeo azafady - ny antsasaky ny fanomezana dia mandeha amin'ny asa soa). Nahazo izay rehetra ilainao amin'ny mpanjifa FTP matanjaka!
Twitbin - dia mpanjifa Twitter izay mihazakazaka eo amin'ny sidebar Firefox. Tsy milamina toy ny mihazakazaka ny mpanjifanao manokana, toa Twhirl, nefa mahavita ny fikafika. Maniry aho fa hametraka takelaka vitsivitsy eo amboniny izy ireo mba hahamora ny fandehanany amin'ny valiny mankany amin'ny hafatra mivantana, sns.
ColorZilla - Mila manala ny lokon'ny pejin-tranonkala ve ianao? Fitaovana kely tsara hanaovana azy!
Greasemonkey - add-on mahatalanjona ahafahanao manoratra sy mampiditra ny scripto ho an'ny pejy. Misy script GreaseMonkey mahavariana an-tapitrisany any izay afaka manampy anao amin'ny gmail sy fampiharana hafa iray taonina. Zahao hoe Greasespot ho an'ny farany!
UPDATE: Mampiasà fitandremana miaraka amin'i Greasemonkey, misy script ao izay hanandrana haka vaovao momba ny fidirana ho an'ny tranonkala ara-bola.
CoolIris - add-on mahafinaritra mahafinaritra izay mamadika ny PC-nao na Mac-nao ho lasa moka fizahana Media!
Foxclocks - mampisavoritaka anao ve ny timezones? Ity dia add-on kely mora ampiasaina izay afaka manome anao ny fotoana ankehitriny manerantany.
ScribeFire - misy aza ny mpamoaka bilaogy azonao apetraka ao amin'ny Firefox izay mampiasa XML-RPC, fenitra iray manerana ny ankamaroan'ny sehatra fitorahana bilaogy handefasana atiny. Tsy ampiasaiko ity iray ity, mirona amin'ny ol 'editor ao amin'ny WordPress aho, saingy mbola tsara foana!
Angamba ny ampahany tsara indrindra amin'izany dia ny tsy mila zon'ny Administrator hametraka ireo add-on ireo eo an-toerana, mba hahafahanao mametraka fitaovana miavaka be dia be eo am-pelatananao nefa tsy asianao ny bandy IT-nao. Asao ny lehilahy IT hametraka Firefox anio! Mazava ho azy, raha manomboka hianjera aminao ny Firefox… aza antsoina ny birao fanampiana IT anao… manomboka manala ny sasany amin'ireo add-on ireo!
Tags: hametraka-onsAdobeFirefoxfanampim-panazavana firefoxadd-on marketingtatitra
Ity faran'ny herinandro ity: faran'ny herinandro fanombohana Indianapolis
Vitsy dia vitsy no afaka mahafehy tena toy izany!